Isikulufu esijwayelekile Sompompi Wokugeza Wokugeza ngePop Up Drain Matte
Ikhaya / Amanzi okugeza / Oompompi Bendawo Yokugeza Abasakazekile / WOWOW 2 isibambo 8 intshi esakazeke yangasese Sink Umpompi nge Pop Up Drain Matte Black Basin isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu Taps
Izinzuzo zompompi wokugeza wasendlini yangasese ngamafuphi:
I-PREMIUM VANITY FAUCET- Umzimba omkhulu nesixhumi sompompi omnyama wenziwe ngethusi eliqinile, umsebenzi osindayo noqinile. Ukuhlanganiswa komhlangano wokukhipha umbala we-Pop-up ne-cUPC evunyelwe ukufakwa kokufakwa kufakiwe.
I-TECHNOLOGY YOKUQALA YOKUDALA- Ukuma okukhethekile kwe-"Y" ukwakheka okusheshayo kokuxhuma kulula ukufaka nokugcina imali yamapayipi.
Matte EMNYAMA FINISH- Ukhiye ophansi ekugcineni okumnyama okumsulwa, ukwakheka okuyisipesheli okuphezulu kokudala isitayela sokuhlobisa izindlu zangasese zanamuhla. I-WOWOW ingeza ungqimba lokufaka uphawu lwe-glaze ebusweni obumnyama obungamelana nokungcola nokugqwala ekusetshenzisweni kwansuku zonke.
I-360 DEGREE SWIVEL FAUCET- Isibambo esiphindwe kabili, izingcezu ezintathu zedizayini zilungele ukulawula ukushisa kwamanzi. Ukukhweza okungama-3-hole nge-3-intshi design evamile, ibanga liyashintsheka kuzidingo zakho zangempela.
IWARRANTY UKUSEBENZA KOMPHAKATHI - Kunikezwa iwaranti yeminyaka emihlanu kanye nokwesekwa kwamakhasimende. Imbozwe ukubuya kwezinsuku ezingama-5. Uma unemibuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
I-Matte Black, i-classic engafi, futhi kuyindlela engalokothi isalele emuva. Ezindabeni zasendlini, omnyama uhlala ephezulu futhi ezinzile. Ngenxa yokuthandwa kwesitayela esincane, isunduzele omnyama esihlalweni sobukhosi semibala yakudala. WOWOW isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu, ukukusiza ukudala impilo entsha…
Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu
● Umzimba wepayipi owenziwe ngethusi eliqinile nethusi
● Izinto ezisezingeni eliphakeme ziqinisekisa ukuqina kompompi
● Ubuciko bokuqala bokudala buxhuma ukwakhiwa
● Kulula ukufaka wedwa ngaphandle kweplamba
● INeoperl ABS Nozzle
● Ukuhlanza kulula kakhulu
● Kungasuswa ukuhlanzwa ngaphandle kwamathuluzi
● i-cUPC Kuqinisekisiwe
● I-US Standard 3/8 inch hose water
● I-NSF 61 (Ukuphuza Imiphumela Yezempilo Yamanzi)
● Vikela impilo yakho nomndeni wakho
Iza nomsele ofanayo wombala
● Kuvuselelwe i-Pop up Drain Stopper ngembobo yokugcwala
● Kulula ukufaka kunendle yokuphakamisa induku yendabuko
● 1 x ompompi bamanzi bokugeza abamnyama
● 1 Isethi yezesekeli; 1 x vela ukukhipha okumnyama; 1 x Y yakha ukuxhuma okusheshayo
● Amapayipi amanzi we-2x 60 cm cUPC
I-SKU: 2320500B Categories: Oompompi Bendawo Yokugeza Abasakazekile, Amanzi okugeza Tags: umcengezi mixer kampompi, Kugcwele
11.14 x 10.2 x amasentimitha angu-3.23
I-Deck Mount Esakazekile